सकारात्मक उर्जा प्राप्त गर्नका लागि घरमा राख्नुस् यी ५ विरुवा !! | सुदुरपश्चिम खबर
सकारात्मक उर्जाको हामी सबैलाई आवश्यकता हुन्छ । र आफ्नो आसपास सकारात्कमता बनाइ राख्नका लागि हामी कयौं प्रयास गछौं ताकि पोजेटिभ इनर्जिको माहोल बन्न सकोस् । र, सवै नकारात्मक उर्जा हामीबाट टाढा जाओस् ।
सकारात्मक उर्जाका लागि केही केही विरुवाले पनि साथ दिने गर्छ ।हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक उर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बोट विरुवा छन् जसले हामीलाई उर्जावान बन्न मद्दत गर्छ ।
तुलसीःतुलसी स्वास्थ्यका हिसावले पनि निकै गुणकारी वस्तु हो । यो गुणकारी विरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक उर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ ।
मेहन्दीःसकारात्मक उर्जाका लागि शरीर तथा मन चुस्त र दुरुत हुन आवश्यक हुन्छ । र शरीर र मनको थकानलाई टाढा गर्न लागि गुलमेहन्दी निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो विरुवा घरमा राख्दा निन्द्रको समस्या समेत अन्त्य हुन्छ ।
मनिप्लान्टःघरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुने छ । यस विरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ ।
घ्यू कुमारीःशरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्व छ । तर के तपाइलाई घरमा रहेको नकारात्म उर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छ ?
वाँसःबेम्बु ट्रिले भाग्य तथा प्यार युक्त अवस्था बनाइ राख्नका लागि सहयाता गर्छ । यो सानो खालको वासलाई खासै हेरचाहा को आवश्यकता पनि पर्दै न । साने सिसाको भाडोमा थोरै पानी रखेर एक कुनामा राख्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ःकपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? किन यस्तो हुने गर्छ ?ःहाम्रो शरीरका दुई अंगहरू आजीवन बढिरहन्छन् । ती हुन् नङ र कपाल । हामीहरू फोहोर नजमोस् भनेर नियमित रूपमा कपाल र नङ काट्छौं । तर कपाल र नङ काट्दा हामीलाई दुख्दैन । शरीरका अन्य भाग चाहिँ अलिकति मात्र काटियो भने पनि बेस्सरी दुख्छ । किन यसो हुन्छ त ?